Global Voices teny Malagasy » Asa tanana any am-ponja: manamboatra asa tanana “Made in prison” ireo vehivavy gadra any Albania · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Jolay 2019 10:00 GMT 1	 · Mpanoratra Ardi Pulaj Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Albania, Fampandrosoana, Fanabeazana, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Tranonkala iray mivarotra vokatra namboarin'ireo vehivavy voafonja ao amin'ny fonjan'i Ali Demi ao Tirana, fonja tokana ho an'ireo vehivavy ao amin'ny firenena Balkana ahitana mponina 2,8 tapitrisa ny Made in Prison  (Vita tany Am-ponja ) .
Fisantaran'asa avy amin'ny Orkidea ny tetikasa, FTMF mandala ny zon'ny vehivavy ao an-toerana izy io, ary nahazo famatsiam-bola avy amin'ny Masoivohon'i Etazonia ao Tirana. Hatramin'ny fanombohany tamin'ny 8 marsa 2019 , notohanan'ny Minisiteran'ny Fitsarana sy ny Fitantanana Ankapobe ny Fonja ao Albania ny tetikasa.
Araka ny filazan'ny Fikambanana Eoropeana ho an'ny Fanabeazana eny amin'ny Fonja  (EPEA amin'ny teny Anglisy), manana fonja miisa 23 i Albania. Ali Demi no hany natokana ho an'ny vehivavy. Misy ihany koa hopitaly iray ho an'ny voafonja.
Ny fonja any Albania, ny toby fiasana an-terivozona ary ny toerana famonjana nandritra ny vanim-potoana komonista  no lazaina matetika fa toerana mampihorohoro.
Iray amin'izy ireo ny fonjan'i Spaç , ao amin'ny faritr'i Lezhë. Araka ny voalazan'ny World Monuments Fund, fikambanana natokana fiarovana ny rafitra ara-tantara sy ny vakoka lova ara-kolontsaina manerana izao tontolo izao hoe:
Amin'izao fotoana izao, dia toerana fahatsiarovana ho an'ny mponina eo an-toerana sy fisarihana mpizahatany  sisa ny fonjan'i Spaç.
Araka ny nambaran'ny  fikambanana Albaney ivondronan'ny voafonja ara-politika teo aloha, lehilahy teo amin'ny 5.577 sy vehivavy teo amin'ny 450 no novonoina ho faty noho ny heloka bevava ara-politika nandritra ny vanim-potoana komonista nanomboka tamin'ny taona 1946 hatramin'ny taona 1991. An'aliny ireo nogadraina na nalefa tany amin'ny toby fiasana an-terivozona.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/07/01/140738/
 Orkidea : https://www.facebook.com/OJFOrkidea/
 fanombohany tamin'ny 8 marsa 2019: https://www.facebook.com/OJFOrkidea/posts/346770639381302
 Fikambanana Eoropeana ho an'ny Fanabeazana eny amin'ny Fonja: http://www.epea.org/womens-prison-in-albania/
 vanim-potoana komonista: https://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Socialist_Republic_of_Albania
 fisarihana mpizahatany: https://www.intoalbania.com/attraction/spac-prison/
 Araka ny nambaran'ny: https://balkaninsight.com/2015/10/14/albania-to-open-communists-secret-files-10-13-2015/
 fepetra ratsy : http://www.humanrightseurope.org/2016/03/albania-poor-detention-conditions-and-prison-healthcare-revealed-in-new-anti-torture-report/
 Filankevitr'i Eoropa : https://www.coe.int/en/web/tirana/enhancing-the-protection-of-human-rights-of-prisoners-in-albania